करिनाको तारिफ गर्दा गर्दै आलियाको मुखबाट फुत्कियो बोल्ने नहुने शब्द (भिडियो) – Khabar Silo
एजेन्सी। आलिया भट्टलाई धेरैले नसोचिकन बोल्ने नायिकाको उपमा दिएका छन् । हालै उनीमाथि ठ्याक्कै यस्तै भएको छ । एक कार्यक्रमका बेला आलियाको मुखबाट करिनाको तारिफ गर्दागर्दै अ’श्लील शब्द (एफ वर्ड) निस्कियो ।
आलियाले थपिन्, ‘हामी सधैं उनको तस्बिर हेर्‍छौं र उनको जिम लुकको तारिफ गर्छौं । हामी सोच्छौं कि उनी कति हट छिन् । उनी कहिले यति सुन्दर र हट देखिन बन्द गर्छिन् ? यहाँसम्म कि उनी ट्र्याक पाइन्छ, चप्पल र टिसर्टमा पनि उत्कृष्ट देखिन्छिन् ।’ यति भन्दा भन्दै आलियाको मुखबाट अ’श्लील शब्द निस्कन्छ जुन सुनेर करिनाले आफ्नो हात मुखमा राख्दै भनिन्, ‘भर्खरै के भयो ?’ करणले पनि दोहोराएर उनले के भनिन् भनेर सोधे ? जब यसबारे थाहा भयो कडा स्वरमा आलियालाई भने, ‘के मैले तिमीलाई यसरी नै हुर्काएँ ?’
आलियाले आफ्नो मुख छोपेर बेस्सरी हाँसिन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी साता राष्ट्रसंघको महासभाको बैठकका क्रममा इरानी राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता हुन सक्ने बताएका छन् । राष्ट्रसंघको महासभाको बैठकस्थल न्युयोर्कमा दुवै नेताबीच भेटवार्ता हुने सम्भावनाबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका वेला ट्रम्पको सो भनाइ आएको छ । तर, आफूहरूबीचको भेटघाटको औपचारिक कार्यक्रम तय भइनसकेको उनले जानकारी दिए । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्राेले दुवै नेताबीच वार्ता गराउन प्रयास जारी […]